Hordhaca tubbada biibiilaha API 5L / Farqiga udhaxeeya API 5L PSL1 iyo heerarka PSL2
API 5L guud ahaan waxaa loola jeedaa heerka hirgalinta tubooyinka, kuwaas oo ah dhuumaha loo adeegsado in lagu qaado saliida, uumiga, biyaha, iwm. Dhuumaha xariiqa waxaa ka mid ah tuubooyin bir ah oo bilaa sumad ah iyo tuubooyin bir ah oo bir leh. Waqtigan xaadirka ah, isticmaalka guud ...
Tianjin Sanon Steel tuuboyinka Co, Ogeysiiska Fasaxa Ltd.
Shirkadeenu waxay heli doontaa fasax laga bilaabo Febraayo 10 ilaa 17, 2021. Fasaxu wuxuu noqon doonaa 8 maalmood, waxaanan shaqeyn doonaa Febraayo 18.Waad ku mahadsantahay asxaabta iyo macaamiisha dhamaanba sida loo taageero, Sanadka Cusub waxaan kuugu adeegi doonaa sifiican, rajo waxaan leenahay iskaashi dheeri ah.
Suuqa biibiile Steel aan xuduud lahayn
Ku saabsan suuqa biibiile aan xuduud lahayn, waxaan hubinay oo aan soo bandhignay hal xog. Qiimaha wuxuu bilaabayaa inuu ka kordho Sebtember. Waad hubin kartaa. Hadda qiimaha wuxuu bilaabayaa inuu xasillooni ka bilowdo 22-ka, Diseembar illaa hadda. Kordhin la'aan iyo wax kayar toona. Waxaan u maleyneynaa inay xasilloon tahay Janaayo 2021. waxaad ka heli kartaa cabirka faa'iidadeena ...
Mahadcelin la kulmay - 2021 Waxaan sii wadaynaa "Sii wadid"
Shirkadaada, afarta xilli waa qurux Waad ku mahadsantahay shirkadaada jiilaalka waad ku mahadsantahay inaad nala joogto dhamaanteed Mahadsanidiin macaamiisheenna, alaab-qeybiyeyaasheena iyo dhammaan asxaabteenna waxaan haystaa taageeradiinna Dhammaan xilliyadu waa quruxsan yihiin 2020 weligood ma quusan doono sii wad "Sii wad"
Koollada koolada koonfureed iyo daadinta woqooyiga, dhadhanka dhadhanka guriga –Xilliga Jiilaalka
Xilliga Jiilaalka waa mid ka mid ah afar iyo labaatan ereyada qorraxda iyo xaflad dhaqameed umada Shiinaha. Taariikhdu waa inta u dhexeysa 21-ka Disember iyo 23-aad ee kalandarka Miilaadiga. Dadka waawayn, waxaa jirta maahmaah ah "xilliga qaboobaha ayaa u weyn sida sanadka", laakiin deegaanno kala duwan ...